Mahatonga Ny Firenena Hanahy Izay Ho Zava-Mitranga Manaraka Ny Famonoana an’i ‘Robocop’ Tao Trinidad · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2016 5:51 GMT
Ny polisy mpandrava korontana ao Trinidad sy Tobago. Sary :Georgia Popplewell, azo ampiasaina tamin'ny alàlan'ny lisansa CC BY-NC-ND 2.0 .
Lazao ny teny hoe “Robocop” ao Trinidad sy Tobago fa tsy ny sarimihetsika Amerikana nivoaka tamin'ny 1987 no tonga voalohany ao an-tsaina fa i Selwyn “Robocop” Alexis, mpandraharaha iray voalaza fa lehiben-jiolahy mpanao heloka bevava. Efa nosamborin'ny polisy i Alexis teo aloha tamin'ny fiampangana isan-karazany , anisan'izany ny fakàna an-keriny, halatra mitam-piadiana, fanaovana takalon'aina, ary ny fanodikodinana ny rariny (kolikoly any amin'ny fitsarana?). Tsy tonga hatramin'ny farany mihitsy ireo fiampangana, fa tratra ihany “Robocop” ny farany tamin'ny 17 Jolay 2016, rehefa maty tamin'ny fifampitifirana tao amin'ny toerana fanasana fiara iray izay fananany tao afovoan'i Trinidad .
Araka ny tatitra, nisy olona roa hafa maty tamin'ny herisetra. Toa nahafaty ny iray tamin'ireo mpanafika i Alexis talohan'ny nahafatesany noho ny ratra nahazo azy, ary maty tamin'ny fititifirana ihany koa ny mpanjifa sendra nandalo iray .Zazalahy kely dimy taona iray ihany koa voatifitra , ary efa nahazo fitsaboana ao amin'ny hopitaly ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Naneho ny ahiahiny ireo polisy fa mety hiteraka ady eo amin'ireo samy jiolahy mpifanandrina ao amin'ny faritra ny famonoana .
Nalaza haingana tao amin'ny media sosialy ny vaovao. Nizara ny lahatsarin'ny fitifirana teo amin'ilay toerana ireo mpisera aterineto tao amin'ny Facebook. Maro ny olona no nahatsapa fa voatery haneho hevitra mikasika ilay famonoan'olona. Nizara ny heviny i Kathryn Stollmeyer-Wight:
[…] Ity lehilahy ity, Selwyn ‘Robocop’ Alexis […] Impiry moa izy no efa nosamborina ary navotsotra noho ny tsy fahampian'ny porofo … […]
Androany maty voatifitra i Robocop .
Lehilahy roa hafa ihany koa maty.
Mampalahelo, fa hisy hanao valifaty, satria izay no zava-misy.
Mety tsy mipetraka ao Paris, any Nice na any Baton Rouge isika, kanefa ‘ adala ve ianao ‘. Miaina ao amin'ny T & T isika.
Tao amin'ny lahatsoratra Facebook nalefa ho an'ny daholobe iray hafa , hoy Dane SG Wilson hoe :
Miaina amin'ny sabatra ianao ary matin'ny sabatra. Izay ihany no hany lalan-kivoahana amin'ny fomba fiainana toy izany . […] Maty ny olona tsy manan-tsiny ary miady amin'ny fahafatesana ankehitriny ilay zazalahy kely! ATSAHARO NY FAMONOANA!
Nanontany ilay mpaka sary David Wears tao amin'ny Twitter hoe:
Mifarana eto ny tantara lavan'i #Robocop . Ahoana ny hevitrareo rehetra , #MombaNyFotoana sa #MialaTsinyAmin'nyFahalasanany ? # Trinidad # FamonoanaAoTrinbago
Nisioka i David Rudder monina ao Calypso manaraka akaiky hatrany ny fiarahamonina sy ny politika ao amin'ny firenena (ary manana talenta amin'ny fanasongadinana ny fifanoheran-kevitra manohina) hoe:
‘ MATY VOATIFITRA I ROBOCOP . ‘
Lavo tamin'ny fitifirana ilay mpanao heloka bevava ” malaza ” indrindra ao Trinidad Selwyn ROBOCOP Alexis .
Betsaka ny fanalefahan-teny rehefa hilaza ny mpitarika andian-jiolahy ao Trinidad sy Tobago, izay matetika antsoina hoe “mpanao afera”, ” mpitarika ny fiaraha-monina”, na “mpandraharaha”. Satria afaka manampy ny olona ao amin'ny fiaraha-monina voahitsakitsaka ny olo-malaza toa an'i “Robocop”, ary matetika hajain'ny mponina izay lasa miankina aminy ara-bola izy ireo .
Efa nanomboka nanolo-kevitra ny vady navelan'i Alexis fa ireo olona “tsy mahay mankasitraka” no namono azy izay nomeny fanampiana mandrakariva. Rehefa tonga saina ny vadiny hoy izy fa tsy te-hiasa fotsiny ry zareo hamelona ny tenany, dia najanony ny fanampiana ary “nahatezitra” an-dry zareo izany. Mpanelanelana eo amin'ny fiaraha-monina izy amin'ny maha “Robocop” azy ary tsy tian'ireo mpamono olona ny toerana misy azy satria te hanjakazaka malalaka amin'ny fanaovana heloka bevava ao amin'ny faritra ry zareo, hoy ny vadiny.
Nanontany ny mpisera Twitter iray izay efa zatra ny tandrevaka ataon'ireo fampitam-baovao sasany ao an-toerana rehefa te-hanasongadina ny herisetran'ny heloka bevava, hoe:
@expressupdates @MarkBassant1 hitako ny gazety ao #Trinidad mampiseho ny sary manjavozavo ny fatin'i #Robocop. Voalohany aho no nahatsikaritra sivana natao tamin'ny sarin'ny lasibatry ny mpamono olona. Ahoana no nahatonga izany?
Na ny zanak'i Alexis aza dia nanao antsafa tao amin'ny fampitam-baovao ary nilaza fa “olona niova fo” ny rainy, ary tsy nitady afa-tsy filaminana, tsy nety resy lahatra anefa ireo mpisera Twitter sasany :
maty ihany ny farany ilay ROBOCOP ao Trinidad 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽